Yoga wuxuu isu muujiyaa lamaane: faa'iidooyinka iyo fulinta | Ragga Stylish
Yoga waa nooc jimicsi nasasho ah tan iyo markii ay isku daydo inay yareyso buuqa waxayna naga caawineysaa inaan hagaajino dabacsanaantayada iyo dhaqdhaqaaqa maalin kasta. Waa mid ka mid ah waxqabadyada jireed ee ay jecel yihiin dad badani maadaama ay naga caawineyso inaan ka fogaanno qaab-nololeedka deggan oo aan hagaajino awooddeenna muruqyada, waxay yareysaa xanuunka dhabarka waxayna leedahay faa iidooyin kale caafimaadka maskaxda. Way badan yihiin lammaanaha yoga taas si fiican ayaa loo qaban karaa waxayna kaa caawin kartaa u hogaansanaanta muddada-dheer.
Sababtaas awgeed, waxaan u gogol xaaraynaa maqaalkan si aan kuugu sheegno waxa ay yihiin yoga ugu fiican ee lammaane ahaan iyo maxay yihiin faa'iidooyinkooda.
1 Faa'iidooyinka yoga
2 Yoga wuxuu u eg yahay lamaane
2.1 Kala bixin fidsan
2.2 Laab laab
2.3 Nus nus ah
2.4 Doon laba jibbaaran
2.5 Iskaashatada yoga ayaa iska leh: xagal xagal
2.6 Joogitaanka xoog
Kahor ogaanshaha waxa ay yihiin jimicsiga yoga sida lamaanaha, waxaa muhiim ah in la ogaado waxa faa iidooyinka ah ee ku-dhaqanka jimicsigaani siinayo caafimaadkeenna. Waxay hagaajin kartaa heerarkeena jirdhiska iyo hagaajinta booska, dabacsanaan mooyee. Dhamaan astaamahan muhiimka ah waxay noqon doonaan faa'iidooyinka bilowga ah ee yoga. Aan aragno maxay yihiin faa'iidooyinka kale ee aan sidoo kale ka heli karno sameynta layliyadaan:
Waxay yareysaa cadaadiska dhiigga iyo garaaca wadnaha
Waxay hagaajinaysaa nasashada
Kordhin kalsoonida naftaada
Hagaajinta isku-duwidda iyo isku-fiirsashada
Iska yaree culeyska maalinba maalinta ka dambeysa
Kaa caawiya inaad si fiican u seexato
Waxay ka caawisaa dheefshiidka
Intaa waxaa sii dheer, ku celcelinta jimicsiga yoga waxay kaa caawin kartaa daaweynta xaaladaha sida walwalka, xanuunka dhabarka, iyo niyad-jabka. Si kastaba ha noqotee, dhammaan kuwa uurka leh, waxay leeyihiin dhiig kar, glaucoma ama sciatica waa inay taxaddaraan.
Waxaa jira dad badan oo aan jimicsi bilaabin, ha noqoto tababarka miisaanka, orodka, iwm. U hogaansanaan la'aan awgeed. Xal wax ku ool ah oo wax ku ool ah ayaa ah in loo sameeyo yoga laba qofood Waxaana jira waxyaabo badan oo yoga ah oo lammaane ah kuwaas oo kaa caawin kara oo keliya in aan jimicsiga si fiican u qaban, laakiin sidoo kale in ay awood u yeeshaan joogitaan jimicsigan.
Aynu aragno waxa ugu wanaagsan ee yoga u ah lamaane:
Kala bixin fidsan
Waa mid ka mid ah yoga wada-hawlgalayaasha ugu fiican ee kuwa bilowga ah. Waxay ku saleysan tahay qaab fudud oo fudud oo ka caawiya kicinta nidaamka neerfayaasha waxayna door bidaa nidaamyada wadnaha iyo neefsashada. Heerka lammaanaha, caawin kara dhisida kalsoonida. Waxaan bilaabeynaa inaan gadaal gadaal u istaagno oo cagaha innagaa taabaneyna. Waxaan gacmaha isqabsanaa ilaa gacmaha dib loo kala bixiyo. Waa hab lagu kasbado kalsoonida lamaanahaaga iyo inaad sameysid jawi nasasho leh oo nasasho leh.
Sidoo kale waa boos lagu taliyay bilowga. Samaynta qalloocinta noocan ah waxay si fiican uga caawin kartaa yareynta xiisadda, kala bixidda dhabarka, nasashada qarka u saaran., iwm Intaa waxaa dheer, waa meel ku habboon in lagu dhammeeyo waxqabadka caadiga ah.
Si aan u qabanno laba-laabashada, waxaan bilaabeynaa inaan gadaal u fadhiisano dhabarka iyo lugaha oo isdhaafsan Waxaan gacanta midig dul dhigeynaa jilibka bidix waxaanna bidix ugu gudbineynaa lugta midig hortiisa lamaanaheena. Waa inaad ceshataa illaa hal daqiiqo si aan dhinacyadu mar kale ugu beddelno. Tixraacan waa in dhowr jeer lagu noqnoqdaa.
Nus nus ah
Tani waa mid ka mid ah qaababka ugu caansan uguna tababaran ee yoga. Waxaan sidoo kale ku tababaran karnaa sidii lamaane. Waxay naga caawinaysaa inaan horumarinno jirkeenna jirka iyo dhabarka dambe. Maxaa intaa ka badan, waxay ka faa’iideysaa jilbaha waxayna u oggolaaneysaa muruqyada inay kala baxaan oo ay adkeeyaan. Tani waa sababta oo ah qayb weyn oo ka mid ah muruqyada xasilinta ayaa sidoo kale la shaqeeyay.
Mawqifkaan waxaan kusii fadhinaynaa sagxadda dhulka iyadoo dhabarkayagu isla socdo. Sida aad rabto inaad sameyso jimicsiga hore, waa inaad lugahaaga dhigtaa mid isdulsaaran. Dhabarkayaga ayaan kor uqaadnaa sifiican waana inaan laabta u toosnaa dhanka hore. Marka xigta, waxaan kor u qaadnaa gacmaheena oo waxaan ku biirineynaa gacmaheena kuwa lamaanaha.
Doon laba jibbaaran
Waa mid ka mid ah sawirada sidoo kale shaqsi ahaan loo samayn karo. Waxaad si fiican u shaqeyn kartaa maqnaanshahaaga. Waa muuqaal xoogaa dhib badan laakiin waxay kaa caawinaysaa xoojinta caloosha, lugaha iyo dheereynta lafdhabarta.
Xaaladdan oo kale ayaannu waji ka waji u wada fadhiisannaa meel fog oo aannu isku qaban karno annagoo gacmahana kala bixinna Dhabarkayaga ayaan toosan u taagnaa oo waxaan cagaha ku taageynaa midka lammaanaha kale. Marka hore waa inaan fidinnaa hal lug kadibna kan kale si aan u awoodno inaan hubino inaan ilaalino dheelitirkayaga. Caloosha waa inay ahaato mid firfircoon markasta iyo aragtida kor. Waxaan horumarinaynaa muuqaalkan illaa shan neefsasho oo markale ayaan ku celcelinaynaa.
Iskaashatada yoga ayaa iska leh: xagal xagal
Tani waa mid ka mid ah qaababka ay doorbidayaan dad badan oo horeyba u lahaa heer dabacsanaan. In kasta oo aad awoodid oo aad ushaqayso waxyar, haddana waa muuqaal gaar ahaan loogu talagalay kuwa haysta murqaha hoose ee jirka. Waxay sidoo kale ufiican tahay kuwa doonaya inay yareeyaan xanuunka dhabarka.
Si loo sameeyo qaabkan waa inaan fariisanaa iyadoo aan wajahnay lammaanahaaga iyadoo lugahayagu aad u kala furan yihiin intii aan awoodno Waa inaan dhabarkayaga toosan. Aynu si wada jir ah isugu nimaadno si aan dhabarka u kala qaadno innagoo horay u tiirinayna. Qofka caawinaya qofka foorarsanaya waa inuu ku qabsadaa gacmaha ama curcurada si ay u caawiso dhabarkaaga toosan. Qofka kale waa kan hoos u foorara kuna hoos u dhigaya inta uu kari karo. Waa inaad haysataa booska shan neefsasho. Waxaan ku celinaa mar ama laba qof kasta. Waxaa loo samayn karaa qaab qofku horey ugu tiirsanaan karo halka kan kalena gadaal u dhacayo.
Waa wax iska fudud oo aad u badan. Waxaa loo isticmaalaa in lagu shaqeeyo lugaha iyo badhida iyo sidoo kale dhammaan qaybta dhexe ee jirka. Waxaan sameyn karnaa labo ahaan. Si tan loo sameeyo, waxaan ku bilaabaynaa fool ka fool faraha iyo cagaha taabashada kuwa lammaanahayaga. Waa inaan si adag gacanta ugu qabsanaa oo lugahaaga si fiican u laabi sida haddii aan fadhiisanayno. Sidan oo kale, waxaan awoodnaa inaan ka dhigno xagal qumman lugaha iyo badhida iyo xagal kale oo u dhexeeya badhida iyo dhabarka.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto waxyaabo badan oo ku saabsan yoga kala duwanaanta lammaanaha iyo faa'iidooyinkooda caafimaad.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Yoga wuxuu u eg yahay lamaane